Monday January, 17 2022 - 00:30:53
Monday May 04, 2020 - 09:36:24 in by Hargeysa Office
Asalaamu callaykum . Sida aynu la wada socono waxa dunida ka socda dagaalka lagu la jiro caabuqa Coronavirus / COVID19 oo dunida faro ba'an ku haya dawaladihii awooda is biddi jirayna ciidda ku daray , jiho kasta dunida gaadhay boqolaal kun oo q
Asalaamu callaykum . Sida aynu la wada socono waxa dunida ka socda dagaalka lagu la jiro caabuqa Coronavirus / COVID19 oo dunida faro ba'an ku haya dawaladihii awooda is biddi jirayna ciidda ku daray , jiho kasta dunida gaadhay boqolaal kun oo qofna dilay , kuwo kalan sariiraha wadhay. Caabuqan oo dunida saamayn balaadhan ku yeeshay dhanka caafimaadka , dhaqaalaha , isu socodka cirka , badda iyo dhulkaba , wadamo badan ay la tacaalayaan dhibtiisa .
Sida aynu ka warqabno wadankasta oo dunida ku yaala maanta waxa gurmad u ah oo babaadinta shacabka masuuliyad ugu wayn ay saaran bahda caafimaadka oo habeen iyo hadh ku dadaalaya badqabka , la tacaalida bukaanada cudurkani asiibay iyo xakamaynta faafitaanka caabuqa COVID19 . waxa ay bahda caafimaadka soo saaraan Talooyinka iyo go'aamada caafimaadka bulashada waxtar u leh oo sida loo fuliyo ay ku xidhantay guul in laga gaadho ama la xakameeyo faafida cudurka . Hadaba Inaga oo og in cudurkaasi soo gaadhay dalka ,sida wasaarada horumarinta caafimaadka iyo gudiga u xilsaarani ay inoo sheegeen .
waxa inala gudbaan ka shacab ahaan in aynu qaadano talooyinka iyo go,aamada bahda caafimaadka inoo soo jeediyeen , si aynu bulsho ahaan uga badbaadno masiiibooyinka caabuqa Coronavirus alle ha ina badbaadiyee. Bahda caafimaadka ee maalin iyo habeen u taagan caafimaad qabka dalkooda iyo dadkooda , una soo shaqayn jiray , maantana hawshii qaranka ay u hayeen ugu darsantay la dagaalka caabuqa coronavirus COVID19 oo qofkasta halis ku ah. Inago oo og in bahda caafimaadku khatar ugu jiraan caabuqan una adeegayaan 24 sacaaddood bukaanada cudurkani asiibay ama looga shakisanayay .
hal mihnadlea ma dhakhtar caafimaad oo ka mida bahda caafimaadka oo aynu ku wayno caabuqa coronavirus waa ka daranyay kana xanuun badanyay 100 ruux oo bulashada qaybeheeda kale ah oo u geeriyooda ,sababta oo ah waa indhaha bulashada . Sidaynu ognahay ma haystaan ama kuma filna lebiska ama agabka loogu talagay inay ka difaacan ama ka ilaaliya inay cudurradu usoo gudbaan iyaga, afka qalaadna lagu yidhaah (Medical Protective Clothing). Hadaba ka bulsho ahaan waxa inagu waajiba inaynu garab istaagno una mahad celino , loona sheego inaynu ognahay dadaalka iyo shaqad adag ee dalkooda iyo dadkooda u hayaan . waxa kale oo inagu waajiba shiikh iyo shariif ba , madax iyo mijaba , in bahda caafimaadku talooyinka iyo go'aamada ay soo saaraan sidooda loo dhaqan galiyo. Dawladda , ganacsatada iyo bulashada inta ladan iyaguna ugu deeqaan waxkasta oo ay ubaahanyiin haday qalab noqoto , iyo dhiiri galin ba .
Waad mahadsantiin Waanu ognahay dadaalka aad wadaan , rabi ha idinka abaal mariyo , maanta waxaad gudanaysaan waajibka qarannimo , taariikhada ayaa idin xusi doonta. Waxaad tihiin geesiyada dhabta ah ee maanta bulasha badbaadinaya , cidkasta oo idin kala qayba qaadata caafimaad qabka bulshada waa geesiyada qaranka , haday noqoto ciidanka qaran iyo dawladaba. HA La Garab Istaago Bahda Caafimaaadka
W/Q Eng. Mohamed Ismail Ahmed Istanbul Turkey
Daawo "Khaladkii Ugu Waynaa Ee Xisbiga Kulmiye Galay Waxa uu ahaa ..." Ex Maayar Muraad
15/12/2021 - 15:16:30
Daawo: Raysalwasaare Abiy Ahmed oo ka soo Noqday Furimihii Dagaalku ka Socda
08/12/2021 - 23:57:23
Daawo: Wefti uu Hogaaminayo Wasiirka Horumarinta Caafimaadka JSL oo lagu soo Dhaweeyay Magaaladda Burco
30/11/2021 - 10:05:28
Daawo: Qaabkee ayay isku Guursadeen Gabadha uu dhalay Maalqabeen Bill Gate iyo Wiilka Muslimka ahi
23/11/2021 - 08:30:26
Daawo: Wasaarada Caafimaadka JSL Ayaa Gaadhi Ambulance Ah Ku Wareejisay Maamulka Buuhoodle
01/11/2021 - 22:04:18
"Wadooyin Dambe Oo Hargeisa Jajabnaan Doonaa Ma Jiri Doonto Ee halagu Bushaaraysto Reer Hargaysoow" Maayarkuxigenka Caasimada
28/10/2021 - 09:04:39
Daawo: Nayroobi oo si aan hore loo arag looga Xusay Dhalashadii Nebiga SCW
26/10/2021 - 08:39:53
Daawo: Golaha Guurtida JSL Oo Xukumada JSL Ku Taageray Go,aankii Dawlada JSL Ku saartay Dadka aan u dhalan Dalka
25/10/2021 - 15:03:41
Daawo "Mashaariicda halaga daayo Deegaamaysiga & Gobolaysiga" Madaxweyne ku Xigeenka JSL
25/10/2021 - 14:43:38
23/10/2021 - 23:24:33